5 UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Irish Whiskey Christmas Izipho | Irish Whiskey .com
Ikhaya » Irish Whiskey Izindaba » 5 UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Irish Whiskey Christmas Izipho
Irish Whiskey IzindabaRedbreast
5 UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Irish Whiskey Christmas Izipho
Disemba 13, 2019
Stuart, Yini whiskeys ingabe reccomend njengoba Irish Whiskey Christmas Presents ukuthenga ngoba umngani wami nogologo elihlanyiswa, isihlobo, uzakwabo njll…?
ngaphandle kokungabaza, lokhu ingenye imibuzo ezivame kakhulu ukuthi ngithola ebuzwa ngokuphindaphindiwe ngalesi sikhathi sonyaka lapho abangane bami kusukela ngaphandle ezweni lonke likagologo eyaziyo yami nogologo Blogger ingemuva.
Ngicabanga ukuthi kufanele uqale ngokubuza ukuthi yini eyenza umuntu omuhle sikaKhisimusi kwasekuqaleni? Ngenjwayelo, Christmas izipho kungaba ophanayo, kodwa akufanele nanini sibe ewubuciko kakhulu. Kufanele kube sobala ukuthi umthengi uye nicabangisise ngaphambili kokuphendula abazikhethayo samanje nokunye, kuhle, lapho kufanele kube into engavamile noma ekhethekile mayelana isipho ekhethiwe.
Ngihlale ngicabanga ukuthi izipho best ukuthola akuzona nje yibo Ngingathanda ukuthenga ngokwami, kodwa ngokuvamile yibo ngabe angizange ukuthenga ngoba mina, ngenxa noma izindleko noma umkhuba. Ngokwesibonelo, uma I am a fan of ushokoledi ukukhanya noma ubisi, ke lokho ngokuvamile lokho ngithenge ngoba mina. Ngakho, mhlawumbe isipho esihle kunazo zonke kimi kuzoba i chocolate engavamile amnyama ukuthi ngangingeke ngikwazi ukulokhu, kodwa akasoze cabanga ukuthenga noma ukuzama ngoba mina.
Ngezinye izikhathi isipho esizedlula zonke akuzona nje izintandokazi ajwayelekile, kodwa izipho esilethela ku uhambo entsha ngoba ungcono noma kukubi kakhulu. Ones ukuthi bathathe kuwe ngaphandle ukuphepha ozizwa ungakhululekile ukuwenza.
Gwema “Safe Thenga” Whiskeys
Ziningi ephephile induduzo zone Whiskeys Irish zonke ezivuma enhle izipho yenkampani. Cabanga Yellow Spot, Amandla kaJohane Lane, Bushmills amadala njll. Zonke esihle kakhulu izinga okusezingeni eliphezulu Whiskeys Irish, kodwa futhi zonke kakhulu ijwayelekile kunoma iyiphi Irish Whiskey aficionado cishe has a ibhodlela noma ezimbili ohlotsheni ngalunye kakade nogologo yabo iKhabhinethi ekhaya.
isiphakamiso wami kulo nyaka yilokho ngeSingisi yokuwuthola uthenga ephephile futhi sibheke engavamile, ezingavamile, the pricey-kodwa kunomvuzo kanye whiskeys ukuthi whiskeyphile ungase ungathandi eyanele yokuthenga bona kodwa futhi uthanda ukubona isampula eqoqweni zabo.
I okungajwayelekile – Glengarrif Series Bog Oak futhi Peat angqongqa Cask Whiskeys kusukela West Cork Distillers
Mina yayihlanganisa Glengarrif uchungechunge angqongqa Cask Whiskeys kusukela West Cork Distillers esihlokweni ekuqaleni kwalo nyaka ku 16 Omkhulu Whiskeys Irish Wabasaqalayo. Kuleso sihloko ngakhuluma ngayo West Cork Distillers njengoba “Skunk Works” noma Centre of Excellence ngoba Cutting Edge Irish Whiskey Ukuqamba. Ngiqala ukuzwa mayelana nomsebenzi wabo ushiswe Cask lapho ngase ngomusa abamenyiwe ukuvakashela distillery eminyakeni emibili edlule. Ukusebenzisa inqubo ithuthukiswe-ndlu West Cork Distillers, emiphongolweni kuthiwa ilangabi-ushiswe ligcwele bog-oki, * Peat.
Imiphumela yale nqubo ezintsha ngempela umxhwele futhi usanda bavele emakethe njengoba Glenfgarrif uchungechunge ezimbili Cork West Single Malts usuphelile Irish Bog Oak ushiswe kanye Irish Peat ushiswe emiphongolweni ngokulandelana. Okunengi ukunambitheka esiyingqayizivele yalezi whiskeys livela emiphongolweni ye sekugcineni, Char ligcwele yomdlali ukunambitheka kwesihlahla se-okhi bog noma Peat.
Amanani whiskeys sale mfanelo Uyi ukuntshontsha nje € 40 yingakho mina esikisela ukuthi an fana hle sikaKhisimusi kuzoba isipho kokubili ndawonye babe munye samanje njengoba umkaki ka Glengarriffs! Kodwa uma kwakufanele akhethe elilodwa, Ngingathanda batusa Bog Oak e quirky brown ingilazi ibhodlela yayo.
I Expensive -Sonny Molloys’ Redbreast 16 Unyaka Old Single Cask
Sonny Molloy sika akayedwa omunye the best nogologo libhala Galway City, liphinde omunye the best nogologo libhala Ireland futhi wathola Irish Whiskey Inqola “Whisky Ibha Yonyaka” umklomelo ekuqaleni kwalo nyaka ku-Irish Whiskey Day – 3rd Mashi. Sonny Molloy sika baye baba Association ahlala isikhathi eside ne Midleton Distillery futhi omunye nje Irish Whiskey Amabha ezimbalwa ukusingatha lonke iqoqo of Midleton amabhodlela Ezingavamile kakhulu kuhlanganise ezingavamile kakhulu futhi kuyabiza Midleton Pearl.
Manje Baye noMbutho Midleton ukukhulula magazini okukhethekile Sonny Molloys ka Redbreast 16 Single Embizeni Namanje whiskey ngesikhathi namandla cask. Ngokuvamile Redbreast iza 12, 15 futhi 21 izitatimende yobudala Year Old.
Abaneminyaka endaweni 500 litre Spanish Oak sherry cask, kuphela 570 amabhodlela ayithelanga kusukela cask #10351. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka esinomkhawulo edition nogologo collectable ngempela. Vele 200 amabhodlela sebededeliwe ukudayiswa jikelele Sonny Molloy sika ngentengo okukhethekile € 345. Ngamunye amafomu ibhodlela yingxenye okukhethekile isipho set, obonisa ezimbili libhalwe ngokukhethekile Galway Ireland Crystal inkomishi lendze kanye isitifiketi sobufakazi bobuqiniso, kuvunywe Midleton sika Master Distiller, Brian Nation ababeza ebusuku kwethulwa e Galway emasontweni ambalwa edlule.
Ngeshwa ngenxa committment ngaphambi, Angikwazanga ukuze bathamele lesi senzakalo kwethulwa, kodwa Sonny Molloys babelungile ngokwanele ukuba ningithumelele yokunambitha isampula elincane engiyakuyithuma ubuyekeze kabanzi phezu at WhiskeyBlogger.com e emasontweni ezayo.
Isazi yethu nogologo Declan, ukhuluma nathi ngokusebenzisa entsha Sonny Molloys Redbreast Whisky Isipho Imisa… ephelele isipho sikaKhisimusi ngoba ubani othanda nogologo zabo! 🥃
Iposi olwabiwa Sonny Molloys Galway (@sonnymolloysgalway) ku Dec 13, 2018 ngesikhathi 9:23am PST
Kodwa Ngingakutshela manje ukuthi lokhu Redbreast 16 limelela Midleton Masters uchonywe umdlalo wabo futhi nizame upeni kungcono intengo eqolo, ikakhulukazi njengoba kuza ku ngempela zikanokusho Isipho Pack njengoba kungabonakala okungenhla isiqophi ngezilokotho Sonny Molloys Instagram akhawunti. A Irish Yethula ophanayo kodwa ekhetheke kakhulu Whisky Christmas.
Nginganikezelwa thoyizi ngokwami, kodwa Ngingathanda eyodwa njengomnikelo Yethula! – Teeling Single Embizeni Namanje
Kunzima ukukholelwa ukuthi Teeling inkampani nogologo kuphela 5 ubudala njengoba kokubili iminikelo yabo eyinhloko umfudlana batch encane, lwemithombo olulodwa nokusanhlamvu olulodwa premium yabo yokuphuzwayo Brabazon and Revival konke manje ngokuqinile linamathele Irish Whiskey psyche njengoba uma sezinezinkulungwane 100 iminyaka.
I Teeling Distillery e nenkululeko Dublin manje iminyaka engaphezudlwana nje kwemithathu ubudala (yobudala evumelekile ngoba Whisky Irish) okusho ukuthi kuqala Teeling Whisky kusukela distillery zabo, ebhodweni olulodwa namanje whiskey, manje sikhululiwe ukudayiswa.
Lona ukukhululwa yokuqala kwezentengiselwano Teeling Single Embizeni Namanje Whisky, ikhiqizwa iresiphi of 50% ibhali un-malted futhi 50% ibhali malted, okuyinto Teeling bathi kuyinto ehlukile Irish Mash bill Yaduma ngu Dublin Distillers asendulo.
distilled e 2015 ku Teeling Whisky Distillery futhi asebekhulile ibanga oki intombi, ex-Bourbon kanye ex-iwayini emiphongolweni, lokhu kukhululwa possesses Embizeni abahlukene Namanje ukunambitha Iphrofayili ahlukile Teeling. I-batch 1 we Teeling Single Embizeni Namanje u bevalela ngo-Okthoba 2018 futhi kungagcini 6,000 amabhodlela. Ngokuvamile Single Embizeni Namanje whiskeys bebelokhu edliwa Irish Distillers, ngakho lokhu ingenye kakhulu lokuqala imbiza olulodwa namanje whiskeys Irish eziningana ezintsha ukuba ezivezwa ezimele Irish Whiskey Distilleries. Eziningana ngaphezulu izolandela kusuka kwamanye Distilleries Irish ngonyaka ozayo.
Nginambithile lokhu Teeling Single Embizeni Namanje kanye nje, emasontweni ambalwa edlule kubha Dingle Whisky eDublin ngithole ukunambitheka, ngisho okwesikhathi nogologo abasha kakhulu ukuba “ezithakazelisayo” ukusho okungenani. Kuningi kwenzekani lapha ekhaleni, ukunambitheka kanye sekugcineni, ikakhulukazi imbiza olulodwa namanje ohlangothini okubabayo, kodwa Ngiphinde ihlangabezane metallic evelele tang ukuthi uyobeka ingicasule kokuyithenga njengoba ukuphuza uwiski ngazitholela. Angisuye nogologo Umbuyekezi kuphela zisho ukunambitheka esiyingqayizivele lokhu nogologo entsha. Abantu abaningi engangisebenza nabo ngezikaNkulunkulu ke yokuthi le whiskey sekuyiminyaka emithathu nje ubudala futhi ukuthi nje udinga enye ngenkathi emiphongolweni. Angiqiniseki Ngiyavuma ukuthi lokhu okumqoka, njengoba ngiye banambitha amaningi amasha umoya ukwakheka kanye beya imbiza olulodwa namanje ngaphandle khona kwale element omusha othakazelisayo.
ngokuvamile, uma mina kwenzeke mathupha akafani nogologo ethile, Ngisanda ungabhali ngakho. Kodwa lena Whisky ekhethekile futhi eyingqayizivele Irish kwezinye izindawo eziningi, ngaphoqeleka ukuba ulifake. Kungase nje kudingeka eminyakeni embalwa ngaphezulu le cask ukufinyelela kungcono amandla aphelele, noma kungase ngempela kube entsha “Laphroaig” ka Single Embizeni Whisky Namanje Irish nabalandeli nhlangothi zombili i-agumenti. noma, kungase kwenzeke kimi.
Noma kunjalo, kuba super iphrojekthi. Ingabe ngithenga ibhodlela ngokwami ​​@ € 55 pop? Njengoba selinambithile kanye nje, cishe cha. Kodwa bengingaba yini uthanda recive omunye isipho ukuhlola kanye disect okwengeziwe ekuphumeni kwami? Kasibili! Noma yimuphi Irish Whiskey aficionado kuhlanganise ngokwami ​​ngingathanda ukuba bajabula esinye salezi izingcezu esingavamile futhi ekhethekile kakhulu Irish Whiskey umlando e Christmas yabo Stocking kulo nyaka.
I Ezingavamile kanye abahlukile – Portmagee 9 Unyaka Old Barbados Rum Cask Qeda
Kulungile, isimemezelo isikhathi isithakazelo. Njengoba omunye umnikazi – labaqondisi Portmagee Whisky, Mina baba nengxenye enkulu ukusebenza Brian nethimba emangalisayo e Great Northern Distillery ekuklanyweni, lokugobisa nokuvuthwa lokhu sasivumela esiyingqayizivele Nine Year Old Irish Whiskey eye kudedelwa phezu nogologo emakethe Irish imali elinganiselwe kakhulu.
Ngenxa aficionado likagologo Umbuyekezi, Ngangifuna ukuba udale i-Whisky Irish ukuthi kwadingeka isitayela kanye nokusetshenziswa ukudlulisela icala abanolwazi nogologo fan, kodwa kungaba ukuphuza bangeneke futhi lula i-Irish Whiskey saqala.
Saqala nge kakhulu ngonyaka nesishiyagalolunye ubudala okusanhlamvu olulodwa njengoba ngendwangu mnyama Barbados Dark Rum Cask Qeda bese ungeze ngonyaka nantathu ubudala Irish lwemithombo ethile zingashadile ukunikeza ingxube esiphelele ukujula nakakhulu futhi uhlamvu. Enye touch eliyingqayizivele ukuthi whiskeys konke oshadile esilungile lenhlanganisela enkulu kule emiphongolweni rum kunokuba ukukhula seperately futhi ezihlangene phambi bottling njengoba kuvamisile. Naphezu ezilingana nalo futhi sekugcineni, Portmagee Whisky ungukukhanya ngempela ngombala njengoba sinqume ukungasebenzisi ukwengeza noma iyiphi caramel ngokuvamile kuvunyelwe Umbala yokufakelwa. Futhi awukona Chill ehlungiwe.
Benginomhawu ngokuphelele iyakujabulisa nogologo isiqediwe futhi uzuze ngokwengeziwe ukubuyekezwa omuhle kakhulu wathola kude kangaka.
Umthombo Ohlukile Ubudala Isitatimende Ukubonakaliswa Komusa Portmagee Whisky nge Barbados Rum Cask Qeda bayokhululwa 2019.
Iqoqwana wayengumbulali edition ukukhishwa kwesikhashana nje 399 amabhodlela ibhalwe inombolo, ukudayiswa kuphela Portmagee Village kanye wasekhaya eNingizimu Kerry esifundeni futhi iningi lawo ngesikhathi € 65 sezivele ubuthaphuthaphu zobuciko, abukhali ukuze ungeze esiyingqayizivele 9 Unyaka Old Irish Whiskey eqoqweni lakhe. Iqoqwana ezimbili kulandela ngoJanuwari 2019 nge ukukhululwa emikhulu kweSitatimende Non Ubudala Portmagee (futhi nge-Barbados Cask Qeda) ngenxa yokuba akhululwe jikelele e-Ireland futhi phesheya e Q2, 2019.
I okungajwayelekile – Glendalough 13 Unyaka Old Single Malt Mizunara Oak Qeda
Glendalough Whisky wathatha unyaka nantathu ubudala lwemithombo olulodwa Whisky Irish uwuqedile unyaka owodwa e Mizunara emiphongolweni ye-oki-Japan. I Mizunara emiphongolweni ezingasetshenziswa abiza phezu € 5,000 ngalunye isandla ludalwe le cooper endala eJapane at cooperage Japan kuphela esizimele ngezindleko Ariake ku Hokkaido Island.
Oak Mizunara kusukela Mizuki (amanzi) futhi nara (Umuthi we-oki) kubhekwa Rolls Royce Japanese Whisky emiphongolweni njengoba umsungulo bokhuni okusanhlamvu ububanzi ukuvumela emiphongolweni sikwazi ukuphefumula nogologo a umfutho okukhulu kunalokho European noma American emiphongolweni ye-oki. Izihlahla kumele kube yiminyaka emakhulu mabini ubudala ngaphambi kokuba ukuvunwa
Ngithanda abahlukene ukunambitheka kancane resinish evame Mizunara ngamanothi liphinyiselwe impepho, lukakhukhunathi ikakhulukazi sandalwood. Kungaba nzima ukuthonya stong kakade ukunambitheka profile of ngonyaka nantathu ubudala olulodwa lwemithombo whiskey, kodwa Mizunara cask sekugcineni sigcwalisa futhi sithuthukisa kunokuba overpowers sokwenza imithombo kule nkulumo emangalisayo.
Glendalough 13 Umnyaka owodwa / Mizunara Qeda Single Malt Irish Whiskey
Glendalough Mizunara kuyinto nogologo ukuvula ngezikhathi ezikhethekile. Njalo ingilazi igcwele flavour engavamile ngokumangalisayo ngempela namanye Irish Whiskey sekugcineni. Ngezinye emhlabeni € 100, kungcono Christmas samanje ekhethekile, kodwa omunye iyiphi Irish Whiskey Collector ngabe babazisa futhi kahle, yako iwufanele ngempela utshalomali esengeziwe.
I Teeling, Glendalough futhi Glengarriff whiskeys sonke etholakala kusukela evamile Irish nogologo Izitolo noma ku-intanethi lokuthumela ngaphandle Ireland kusukela Celtic Whisky Isitolo.
Portmagee 9 itholakala Portmagee, Valentia, Caherciveen naseNingizimu Kerry futhi nge ingilazi in the Ihhotela Minella e Clonmel.
Sonny Molloys Redbreast 16 Cask Amandla kuyatholakala uthenge Sonny Molloys Ibha e Galway.
Yiba wonke umuntu emangalisayo Christmas futhi ngibheke phambili ekuboneni nawe zonke futhi emumva kwengu- 2019.
Izinyembezi Writers 'Double Oak Kwenza Ummeli Whisky Top Ten
Irish Whiskey Isitolo .com - Thenga Irish Whiskey Online
Amathegi: billy leightoncaherciveencaherciveen whiskeyChristmas WhiskyDistillers IrishIrish lwemithombo olulodwawhiskey IrishIrish Whiskey BlogIrish nogologo brandIrish nogologo ukumakethaIrish Whiskey IzindabaIrish Ukubuyekeza whiskeyIrish nogologo umzilamidletonPortmagee WhiskyPortmagee Whisky ukubuyekezaSingle Malt Irish Whiskeyimbiza olulodwa namanjeimbiza olulodwa namanje nogologo IrishStuart McNamarateelingentshonalanga kukakhokho DistillersWhisky-Bloggerophuzi endaweni